ट्र्म्प-किम वार्तामा दारीको महत्व : को हुन् वार्ताका दारीवाल सुत्रधार ? « Gajureal
ट्र्म्प-किम वार्तामा दारीको महत्व : को हुन् वार्ताका दारीवाल सुत्रधार ?
प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०६:३९
‘हाम्रा साना दुःखले आर्ज्याको दारी होईन, कर्तब्य र इमानदारीताको साझा फुलबारी हो, सारी छोडेर ‘स्लिभलेस’मा झरेका नारीलाई चेतना भया ।’ दारी पुराणमा लेखिएको छैन । नलेखिएपनी, जसरी नारीको लामो केशले उनको फेसलाई ‘ब्युटि एन्ड बेस्ट’ बनाईदिन्छ त्यसैगरी पुरुषको सुन्दर दारीले पनि उसको जोश र जिम्मेवारीको महत्व दर्शाउँछ ।
दारी पाल्दैमा मान्छे घरबारी छोडेर बनवारीतिर लागेको ठान्नु हुन्न । संसारलाई माया मारी जङ्गल पसेको पनि कमाा’ हुन्न । दारीले न घर छोड्न उक्साउँछ, न संबन्ध तोड्न सिकाउँछ १ यसले त सुमधुर नाता जोड्न सिकाउँछ । नपत्याए फेसबुक ‘दारी ग्याङ्ग’ गाईजहरुको सोसियल अवारनेस एक्टिविटिजलाई हेर्नुहोस् ।
त्यसैले आउनोस्, आज दारीको बारेमा कुराकानी गरौं । दारी शाष्त्रले यसका प्रकारलाई निम्नानुसार बर्गिकरण गरेको छ ।
इमानदारी: चिटिक्क परेको हुन्छ । इमान जमानमा बिश्वास गर्छ । ईमान्दारिताको हद यति हुन्छ कि कसैले प्रपोज हान्यो भने मम्मी ड्याडीलाई सोध्नुपर्छ भन्छन् ।
खबर्दारी: यस्तो दारी चोर औंला ठडिएकोजस्तो हुन्छ । यो देख्दा मान्छे सतर्क हुने गर्दछ । आफैंलाई पनि यिनिहरु बेलाबेला खबर्दारी गरि रहेका हुन्छन्, मन नभाँडियोस् भनेर ।
हवलदारी: प्राय: यस्तो दारी पाल्नेहरु पुलिसको हवलदारजस्तो देखिन्छन् । यो दारी देख्दा मानिस अलिकति डराउँन सक्छ । हवलदारी दायीत्वबोध र कर्तब्यबोधको प्रतीक मानिन्छ ।
बोकेदारी: भन्न त बोकाकोजस्तो भन्छन् तर यस्तो हैन । खासमा गालामा दारी पलाएको भन्दापनि गालालाई बोक्न लगाएजस्तो देखिन्छ । यसैले यसलाई बोकेदारी भनिएको हो । बोकेदारी पाल्नेहरु प्राय: बोकाको मासु खांदैनन् ।
झुसेदारी: शुशिल कोईरालाका दारी संझिन्छु हुन्छ, हो त्यस्तै हो झुसेदारी । लामो दारीलाई आगोमा झोसेको कारणले हैन । झुसिलकिराको याद आउने हुनाले झुसे दारी भनिएको हो । यिनिहरु प्रकृतिप्रेमी हुन्छन् ।
खातिरदारी: खातिरदारीहरु पाहुनाको खुब ख्याल गर्छन् । पाहुना लाग्नपनि मन पराउँछन् । यिनिहरुको घरमा प्राय: भात पाक्दैन । रेष्टुरेन्टमा प्राय: भेटिन्छन् ।
दिक्दारी: दिग्दारी अल्छि स्वाभावका हुन्छन् । सफलता प्राप्त गर्न धेरै प्रयास गर्नुपर्छ ।
फौजदारी: लडाकु स्वभावका हुन्छन् । भै परि आउँदा नडराई भाग्ने हैसियत राख्दछन् ।
अनुदारी: थोरै तानाशाही स्वभाव हुन्छ तर मनका सुन्दर हुन्छन् । यिनको औसत अनु नामकी पत्नी वा प्रेमिका हुन्छन् । दारी बिज्ञानले यसलाई अद्भुत संयोग मानेको छ ।
कामदारी: खाली बस्नै सक्दैनन्, केही न केही गरि रहनुपर्छ । फुर्सद भन्ने उनिहरुको शब्दकोशमा हुन्न । केही काम भएन भने यिनीहरु दारी मुसारेरपनि बस्ने गर्छन् ।
साझेदारी: यिनिहरु जे काम गर्दापनि टीममा गर्न रुचाउँछन् । यहाँसम्म कि डेटिङपनि ग्रुपमा जान खोज्छन् ।
वफादारी: वफादारितता यिनको नैसर्गिक स्वभाव हो । यिनिहरु यति वफादारी हुन्छन् कि सारीको अनुरोधमा दारी छोड्न पनि तयार हुन्छन् ।
बेवफादारी: सनम बेवफा टाईपको लाईफ स्टाईल हुन्छ । धोकै धोकाको पोको बोकेर हिंड्ने गर्छन तर ब्यवहार बिग्रिएपनि हार खाँदैनन् । कैलेकाहीं निगार खान्छन् ।
भारदारी: यिनिहरु ठूल्ठूला भार बोक्छन् । भारतारी प्राय: प्रेमिकाहरु भारी हुन्छन् । प्राय: यिनिहरु सत्ताको वरीपरि बस्न रुचाउँछन् ।
भागेदारी: यिनको दारी भाग भाग लगाएर काटिएको हुन्छ । यिनिहरु भाग्यबादी हुन्छन् । प्राय: डोकामा दुध दुहुने प्रयास गर्छन् ।
दिलदारी: यिनिहरुको मन ठूलो हुन्छ । मुटुपनि चार/पाँचवटा हुन्छ । कसैले माग्यो भने सबै मुटु दान दिएर आफु कुख्राको मुटु खाएपनि बाँच्न सक्छन् ।
ठानेदारी: जिल्लाको ईन्र्जाज हुनुभन्दा गाउँको ठानेदार हुने स्वभाव हुन्छ । यिनिहरुले जे ठान्छन्, त्यसैलाई ठिक मान्छन् । त्यसैले यसलाई ठानेदारी भनिएको हो ।
समझदारी: यिनिहरुमा गहिरो समझ हुन्छ । जुनसुकै बिबाद मिलाउँन यिनिहरु सक्षम हुन्छन् । भनिन्छ, किम–ट्र्म्प वार्ता सुत्रधार नै एकजना दारीवाल थिए ।
भुक्केदारी: भुक्ने भएकाले भुक्केदारी भनिएको हैन । सधैं भुक्का रहने भएकोलेपनि यसो यसो भनिएको हैन । प्राय: यिनिहरु भक्का खाँदा दारीमा दल्ने गर्दछन् ।
बैदारी: यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो दारी स्टाइल हो । उहिले पूर्वी ताप्लेजुङका बैदारबाले यसको शुरुवात गरेका हुन् । बैदारीहरु हिसाब किताब राख्न माहिर मानिन्छन्, घरको होस् वा परको ।
दमदारी: दमदारीहरु एकदमै आँटिला र ठाँटिला हुन्छ । हावा फुस्कि सकेकालाई यिनले दम दिएर फुलाउन सक्छन् । आलुदम एकदमै मन पराउँछन् । जिवनको उत्तरार्दमा यिनलाई दमको रोगले सताउने सम्भावना हुन्छ ।
उदारी: एकदमै उदार स्वभावका हुन्छन् । यहाँसम्म कि कसैको गाला नराम्रो छ भने आफ्नो दारी उपहार दिन्छन् ।
कोदारी: कसैको दारी कोदोबारीजस्तो हुन्छ । कसैको तातोपानी कोदारीजस्तो हुन्छ । यिनीहरु प्राय: पहाडी भेगमा बस्न रुचाउँछन् ।
हरिदारी: खासमा यो दारीलाई हरिद्धारी भनिन्छ तर अपभ्रंस भएर हरिदारी बन्न पुग्यो । यिनिहरु हरिद्धारमा बस्छन् । सजिलो हुन्जेल दारी पाल्छन्, अप्ठेरो पर्दा दारी फाल्छन्, कुर्ता लगाएर कुलेलम ठोक्छन् ।
दुदारी: यिनिहरु दुधका सोखिन हुन्छन् । चियाको साटो दुध खान्छन् । दुध भेटेनन् भने दुध पाउडरले भएपनि चित्त बुझाउँछन् ।
मदारी: यिनिहरु अर्कालाई नँचाएर आनन्द लिने गर्छन् । कैलेकाहीं दोश्रोलेपनि नचाई रहेको हुन्छ । यो कुरो पत्तै हुँदैन ।
बाँदरी: भन्नै परेन, उनिहरुको दाह्री यस्तो हुन्छ ।